android ဖုန်းများအတွက် file ကို Manager က APK ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို
Android ဖိုင် Manager ကိုအားကောင်းတဲ့အခမဲ့ပြည်တွင်းနှင့်ကွန်ယက်ကိုဖိုင်မန်နေဂျာများနှင့်လျှောက်လွှာမန်နေဂျာဖိုင်မှတ်တမ်းမန်နေဂျာကွန်ယက်မန်နေဂျာမီဒီယာ Manager ကဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသုံးစွဲသူအာဏာအရှိဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာရွေးကောက်တော်မူပြီတကား
သင်သည်သင်၏ဖိုင်များကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမှာသူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်များလွန်းခြင်းနှင့်အာဏာမဲ့များမှာထင်ပါသလား? ဤသည် Full-featured ဖိုင်မန်နေဂျာကိုသင်ဖုန်းကိုနေ့တိုင်း၌သင်တို့၏ software ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အဘို့အသေးငယ်တာ, လုံးဝလိုအပ်သောပါ! ထိုသို့သောဂီတ, ဗီဒီယို, ပုံများ, စာရွက်စာတမ်းများ, ဒါမှမဟုတ်ဖုန်း APP ကိုပေါ်မဆိုတပ်ဆင်အဖြစ်, သင်ဖိုင်မန်နေဂျာမှတဆင့်တစ်ချက်နိုင်, လွယ်ကူပါတယ် အဆိုပါဖုန်း၏ပြဿနာ, ဒါကြောင့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုပိုမိုတာရှည်ခံရန်ပြည့်စုံဖြေရှင်းချက်မိုဘိုင်းဖုန်းများစီမံခန့်ခွဲ, ဒါကြောင့်သင်ပိုမိုအဆင်ပြေများနှင့်လုံးဝအခမဲ့နေ့စဉ်ဘဝပါ!
4.31 ကို MB
အကြောင်းကိုအလားတူအကြောင်းအရာ Read ဖိုင်မန်နေဂျာ APK ကို